Mila fandinihana dieny izao… | NewsMada
Mila fandinihana dieny izao…
Tsy misy tsy mitondra faisana amin’izao ady amin’ny fiha­naky ny valanaretina Covid-19 izao. Ady mitondra fiko­ron­tanam-piainana, fahasimbana, faharavana. Voadona avokoa ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga, indrindra ny lafiny sosialy sy toekarena. Mampikaikaika ny maro ny tsy fahazoana miasa, ny famerana ny fotoam-piasana, ny fahaverezan’ny asa, ny tsy fisian’ny asa.
Mizaka ny tsy eran’ny aina ny isan-tokantrano sy ny isam-batan’olona miatrika ny isan’andro: ny ho hanina anio, tadia­vina rahampitso fa notrosaina omaly. Toy izany hatrany… Mandra-pahoviana? Manampy trotraka amin’izao ny tsy fandriampahalemana noho ny hala-boty na hala-botry, ny fanendahana, ny sinto-mahery… Tsy an-drenivohitra tsy amba­nivohitra, tsy andro tsy alina…
Manomboka simba an-toerana koa ny toe-tsain’ny sasany noho ny fihibohana? Misy mandatsaka aina ireo olon-dratsy sasany, na tsy inona akory aza, ohatra, ny eny amin’ny tena na ao an-trano: tonga hatramin’ny vaky lakozia, halatra voly eny an-tsaha… Nefa samy tsy manana izao. Vokany, mivahavaha be ihany ny fiarahamonina. Mila tsy hifampatoky firy intsony ny maro.
Efa mby amin’ny tsy tahotra sy tsy henatra? Fahasimbana sy tsy filaminana anaty. Tsy ahoana izay fifanajana, fihava­nana, fifampitsinjovana… Tratran’ny fahavoazana sy ny faha­lovana koa ny kolontsaina amin’ny fandalana soatoavina? Na, sanatria, ny kibo hoe noana sisa no hany mitondra sy mibaiko. Mitady hahazo vahana na efa mihamahazo vahana ny samy maka ho azy amin’izao.
Mahavery fanahy mbola velona izay mitranga sy iainana. Amin’izao tsy mbola fisokafan’ny trano fiangonana izao, eo koa, ohatra, ny fiantraikan’izay amin’ny fiainam-panahin’ny mpino sasany: mihiboka hatramin’ny fo amam-panahy? Mby amin’ny hoe ho reraka ny fon’ny olona eo am-piandrasana ny zavatra ho avy, misy ny hihemotra amin’ny finoana, hanga­tsiaka ny fon’ny olona…
Mila fandinihana dieny izao ho amin’ny fanarenana, fano­renan, fanonerana… Ndrao manimba lavitra ny olona rehetra sy ny olona manontolo noho ny valanaretina ny faha­voazana sy fahalovana?